Home » သတင်း » 2019 ISC အနောက်မှာမိုဘိုင်း / Rackmount Applications ကိုများအတွက် VMP ဟန်ပြလူကြိုက်များသော DVR lockbox
2019 ISC အနောက်မှာမိုဘိုင်း / Rackmount Applications ကိုများအတွက် VMP ဟန်ပြလူကြိုက်များသော DVR lockbox
STEVENSVILLE, Md ။ , ဖေဖော်ဝါရီလ 11, 2019 - ဗီဒီယိုတောင်ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းများ (videomount.com), အထုတ်လွှင့်မှုအတွက် mounting ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, လုံခြုံရေး, လူနေအိမ်စီးပွားဖြစ်, CI, နှင့်လိုလားသူ Audio / Video စျေးကွက်ကြောင့် ISC အနောက် 1 စဉ်အတွင်းလူကြိုက်များ DVR-MB2019 မိုဘိုင်း / Rackmount DVR lockbox တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည်, ကျင်းပ Las Vegas မှ, Nev ၌။ တွင် Sands Expo နှင့်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ, တဲမှာဧပြီလ 10-12 ထံမှ #1046 ။ အဆိုပါ DVR-MB1 $ 236.95 တစ်ခု MSRP ရှိပါတယ်။
"ဒီ DVR-MB1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်များ DVR-LB1 နှင့် DVR-LB3 DVR lockbox တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်" ဟု Keith Fulmer, ဗီဒီယိုတောင်ပေါ်မှာထုတျကုနျ၏ဥက္ကဋ္ဌကရှင်းပြသည်။ "ဒီ DVR-MB1 အထူးသခရီးဆောင်သို့မဟုတ်ခိုးယူသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်း setting တွင်တပ်ဆင်ထားထိန်သိမ်းဖြစ်စေဖြစ်ခြင်း DVRs ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်သောသူတို့၏အမျိုးအစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ DVR-MB1 လည်းဝေးလံခေါင်ဖျားထုတ်လွှင့်, ပညာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောအုပ်စုတွေ, နှင့်မိုဘိုင်းအသံဖမ်းကိရိယာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားစေခြင်းငှါအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှာဖွေနေပထမဦးဆုံးအဖြေတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်၏။ "
Fulmer အဆိုအရ, High-end အီလက်ထရွန်းနစ်တစ်ဦးဒီနေ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဓိက, အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဈေးဖြစ်လာကြပါပြီ။ DVRs အပါအဝင်, ဤစျေးကြီးနည်းပညာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ, အမျှ ပို. ပို. စီးပွားဖြစ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် setting တွင်နေအိမ်များကိုရှာဖွေ, အပိုဆောင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများအတွက်ယူနစ်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုများနှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမထိခိုက်စေဘဲထိခိုက်သို့မဟုတ်ခိုးယူကြသည်မဟုတ်, ဤအီလက်ထရွန်းနစ်အာမခံထားခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ VMP DVR-MB1 lockbox ၏အပိုဆောင်း features တွေပါဝင်သည်:
ပြည်ထဲရေးအတိုင်းအတာ 17 "W x ကို 13.8": D x ကို3"H ကို
lockbox မိုဘိုင်း application များအတွက်လေးနှစ်ဖက်ပေါ် mountable ဖြစ်ပါသည်
တစ်ဦး2ru ခြုံငုံအမြင့်နှင့်အတူ mountable ထိန်သိမ်း (3.5in ။ )
မိုဘိုင်း application များအတွက် DVR များအတွက်ထည့်သွင်း mounting strips တွေ
လူပျိုပန်ကာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဖွင့်ဖို့လေးပရိတ်သတ်တွေ (DVRMB1FAN) အတွက် mounting နေရာများ
Key ကိုသော့ခတ်အိမ်ရှေ့တံခါးကို hinged
တက်ကြွသို့မဟုတ် passive အပူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဖြုတ်ပိတ်ဆို့ blockers နှင့်အတူအကွိမျမြားစှာအပေါက်တွေ
Black ကငြိမ်ခံနိုင်ရည်အမှုန့်အင်္ကျီကို finish ကို
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.videomount.com သို့မဟုတ်သေဆုံးသူအခမဲ့ 877-281-2169 ခေါ်ဆိုပါ။ သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာများအတွက် mount ညာဘက်ရွေးချယ်ရာတွင်အကူအညီလိုအပျလြှငျ, မှာ VideoMount ™ -Finder ကြိုးစားကြ www.chooseamount.com.
ဗီဒီယိုကိုတောင်ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းများ (VMP) 1994 ကတည်းက A / V ကို, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် mounting ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ VMP ထုတ်ကုန်တသမတ်တည်းအားလုံးအနေနဲ့ထူးချွန်တန်ဖိုးကိုမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများကိုဆက်ကပ်။ VMP ရဲ့ထုတ်ကုန်ပူဇော်သက္ကာကိုအများအပြားစျေးကွက်တလွှားကြီးထွားလာ segments များဖြေရှင်းရန် mounting စနစ်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။
VMP နေရာတိုင်းပညာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ရွေးချယ်မှု၏ mounting စနစ်များကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ အားလုံးထုတ်ကုန်များအတွက်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကမ္ဘာတစ်လျှောက်လုံးကိုးကွယ်အံ့သောနှင့်လုံခြုံရေး applications များ၏အိမ်ရာများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ဟိုတယ်များ, စားသောက်ဆိုင်များ, ကျောင်းတွေ, ဆေးရုံတွေ, အိမ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်အတူ install လုပ်ထားပါပြီ။ VMP စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့အပေါ်နှင့် "ထောက်ခံကြောင်း" ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အဓိကကြောင်းကိုနားလည်သောသူတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ပညာရှင်များနှင့်အတူသူတို့အားထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်သူ့ဟာသူ prides ။
CRAS & Dolby Bring Suns Into the Atmos-Phere During Live NBA Game Broadcast; Featured at 2019 NAB Show - မေလ 9, 2019
64 Audio Drives Hearing Health Initiative; Offers Free Custom Earplugs with Custom IEM Purchases - မေလ 3, 2019
ပလက်တီနမ်Tools®ကြေညာချက်များ 2019 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်းတစ်နှစ်တာ၏ကိုယ်စားလှယ်များ - ဧပြီလ 17, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-02-11
ယခင်: Nevion virtuoso ရုပ်ရှင်များတွင် a52 အရောင်အဘို့အတန်းနှင့်စီးပွားဖြစ်ရုပ်ရှင် Post-ထုတ်လုပ်မှုစေသည်
နောက်တစ်ခု: ကမျောနီကာ Batchelor ဟောလိဝုဒ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးတစ် Springboard အဖြစ် RSP သင်တန်းအသုံးပြု